मुलुकभरका पाँंचजना किसानलाई राष्ट्रपति पुरस्कार – NewsAgro
मुलुकभरका पाँंचजना किसानलाई राष्ट्रपति पुरस्कार
June 28, 2015 June 30, 2015 NewsAgro 1 Comment
यो समाचार 582 पटक पढिएको
असार १५ गते प्रदान गरिने
काठमाडौं/ सुदुरपश्चिम टिकापुर ७ कैलालीका किसान कालु हमाललाई नगद रु दुई लाख राशिको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रपति कृषक पुरस्कार वितरण गरिने भएको छ । सर्वोत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो भाग्यशाली किसान हमाल केरा व्यवसायी हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट विसं २०७१ असार ४ गते लागूभएको एक वर्षपछि सो पुरस्कार वितरण गर्न लागिएको हो ।
हमालले यसअघि जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरमा १० हजार तथा २५ हजार रुपैयाँंसहित उत्कृष्ठ किसानमा छनौट हुनुभएको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट वक्तव्यमा उत्कृष्ट कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार प्रदान गरिने छ, भनी उल्लेख थियो । आगामी वर्षमा निरन्तरता दिनका लागि यो कार्यविधि तयार गरी लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय धान दिवस असार १५ मा कृषि विकासमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले सो पुरस्कार राजधानीमा वितरण गर्नुहुने कृषि विकास मन्त्रालय कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाका प्रमुख सुनिल सिंहले न्युजएग्रोलाई बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, पूर्वाञ्चलको भिरगाँंउ १ धनकुटटका अलैँची व्यवसायी चन्द्रलाल तामाङ, पश्चिमाञ्चल लेखनाथ २ कास्कीका बङ्गुरपालक किसान छयामबहादुर थापा, मध्यपश्चिमाञ्चल सोरहवा २ कास्कीका मत्स्यपालक कृषक छायादत्त भुसाल र मध्यमाञ्चल चित्रवत ७ चितवनका पुष्प व्यवसायी प्रकाश पन्त पनि उत्कृष्ट किसानमा छनौट हुनुभएको छ । उहाँंहरुलाई जनही रु एक लाख राशिको उत्कृष्ट पुरस्कार बितरण गर्ने भएको छ ।
कृषि पेसालाई सम्मानित र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति किसान पुरस्कारको स्थापना गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले बताउनुभयो । राष्ट्रपति उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ अनुसार एक जना कृषकलाई सर्वोत्कृष्ट र चारजनालाई उत्कृष्ट किसान पुरस्कार वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो छ, पुरस्कृत किसानको संक्षिप्त परिचय
१. कालु हमाल, विद्या : केराखेती
टिकापुर ७ कैलाली, सुदुरपश्चिम
जन्म २०१६, अध्ययन, कृषिमा स्नातक बीएससी कृषि, २०४० सालदेखि १० बोट केराबाट कृषि सुरु । हाल १० विगहामा उन्नत जातको केरा फार्म । कृषि पर्यटनलाई बढावा दिएर केराका विभिन्न ३७ वटा परिकारसहितको रेष्टुरेन्ट सञ्चालन । केराका परिकारमध्ये केराका चिप्स, मम, अचार, वाइन, ब्राण्डीलगायतका परिकार उत्पादन गर्ने पहिलो व्यवसायिक केरा फार्मको रुपमा विकास गरिएको । हालसम्मको जम्मा लगानी एक करोड ६८ लाख र बार्षिक आम्दानी २ करोड भइरहेको । टिकापुर लगायत कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका साथै चितवन नवलपरासीलगायत देशका विभिन्न स्थाानका कृषकहरुलाई प्रविधि, शिप र केराका बीउ हस्तानान्तर गर्दै आएको । केराको नमूना श्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिएको । ३५ जनालाई रोजगारी । हमाल आफै कृषि बिज्ञ नभएर समाजसेवी र भारोत्तोलन खेलाडीसमेत हुनुहुन्छ ।
२. चन्द्रलाल तामांग., विद्या: अलैची र चियाखेती
भिरगांउ २, धनकुट्टा, पूर्वाञ्चल
३५ दिने ग्रामिण कृषि कार्यकर्ता तालिम प्राप्त । २०४३ सालदेखि कृषिमा आवद्ध । २ रोपनी जग्गामा आलु खेतीबाट कृषि सुरु । हाल २४७ रोपनी जग्गामध्ये १६१ रोपनीमा खेती । जसमध्ये ३० रोपनीमा अलैची खेती, १० रोपनीमा अलैचीको नर्सरी । ६० रोपनीमा चिया खेती । ४४ रोपनीमा बिभिन्न खाले भुई घांस र डाले घांस । ८ रोपनीमा किबी खेती । आफै गडयौला मल उत्पादन गरेर प्रयोग गर्ने गरेको । हालसम्म कूल लगानी ९ लाख ८० हजार र बार्षिक आम्दानी ३३ लाख ५० हजार रहेको । यसमध्ये ३० लाख ५० हजार अलैची खेती र नर्सरीबाट । २ लाख पशु पालन, १ लाख अन्य कृषि उपज र गडयौला मलबाट प्राप्त गर्ने गरेको । हाल ८ जनालाई रोजगारी प्रदान ।
३. छयामबहादुर थापा., विद्या : बंगुर पालन
लेखनाथ २ रिठेपानी, कास्की, पश्चिमाञ्चल
२०६२ सालदेखि २ ओटा बंगुरबाट कृषि सुरु । हाल ल्याण्डरस, योर्कसायर र ड्युरोक जातका साना तथा ठूला गरेर १४०० भन्दा बढी बंगुर पालन । व्यवस्थित बंगुर पालनका लागि जम्मा ५२ रोपनीमा ९ वटा आधुनिक खोर निर्माण । बंगुरको लागि अटोमेटिक पानी पिउने मेसिन जडान गरिएको, फोहोर व्यवस्थापनका लागि अण्डर ग्राउण्ड केनलको व्यवस्था । बंगुरको नश्ल सुधारका लागि नीजि फार्ममा फ्रोजन सिमेन प्रयोग गर्ने र उत्पादन गर्ने पहिलो किसान । हालसम्म कूल १ करोड ७७ लाख ३१ हजार । बार्षिक आम्दानी १ करोड ७२ लाख ६६ हजार । हाल २४ जनाले रोजगारी पाएको ।
४. छायादत्त भुषाल, विद्या : माछा पालन
सोरहवा २ बर्दिया, मध्य पश्चिमाञ्चल
२०४२ सालदेखि कृषिमा आवद्ध । बर्दियाको बढैया ताल ठेक्का लिएर सुरु । हाल बर्दिया, कैलालीलगायतका बिभिन्न स्थाानका निजी र ठेक्कामा लिएर १२१ बिगाहा जग्गामा माछापालन । मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदुरपश्चिमाञ्चलमा सामुदायिक ताल ठेक्कामा लिएर ठूलो रकम स्थानीय निकाय र सरकारलाई आम्दानी गराएको । सामाजिक सेवामा बर्दियाको १ बिद्यालयलाई १ विगहा प्रदान । हालसम्म १ करोड १० लाख लगानी । बार्षिक आम्दानी ५० लाख । २०० जनालाई मौसमअनुसार रोजगारी दिएको ।
५. प्रकाश पन्त, विद्या : पुष्प व्यवसायी
चित्रवन ७, चितवन, मध्यमाञ्चल
२०५६ देखि १० कट्हा जग्गामा पुष्पखेती गरेर कृषिमा आवद्ध । हाल १७ विगहा जग्गामध्ये १५ बिगहामा पुष्प खेती र २ बिहामा मेवा खेती । चितवनमा उन्नत प्रविधियुक्त पुष्पखेतीको रुपमा विकास गरिएको । फार्ममा विभिन्न प्रकारका फूलहरुका साथै कट् फलावर उत्पादन भइरहेको । हालसम्मको कूल लगानी ३ करोड रहेको । आम्दानी बार्षिक ४० लाख रहेको । फार्ममा बर्षैभरी १५०० जनाले रोजगारी पाइरहेको ।
← राजधानीमा भोलीदेखि पहिलो राष्ट्रिय आँंप महोत्सव
धान दिवस भव्यतापूर्वक मनाइने →